Shiinaha ADSS Soosaarida Hakinta Warshad iyo Warshad | JOOJI
ADSS Hakinta haysa ADSS fiilada ka joojinta fiilada waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro dhamaan fiilooyinka isdifaaca ee isdifaaca si loo helo munaarado toosan.
ADSS xadhig haynta ayaa loo isticmaalaa in lagu xiro dhamaan fiilooyinka isdaba jooga ah ee isdaba jooga ah si loo helo munaaradaha tooska ah. Culeyska firfircoon ee gariirka dabaysha ayaa lagu cabudhin karaa badeecada si loo hagaajiyo caabbinta muuqaalka indhaha. qiimaha, si looga hortago fiilada indhaha inay dhaliso luminta lifaaqa.
Ku Isku-hakinka Hakinta Horudhac ahwaa qalabka isku xidha fiilada ADSS ee ku laalaada tiirarka xarigga gudbinta (munaarad). Waxay yareyn kartaa culeyska taagan ee barta taageerada, waxay hagaajineysaa awoodda fiilooyinka-gariirka fiilada, iyo barkinta ka dhanka ah buuqa firfircoon ee gariirka Aeolian. iyo sidoo kale in la hubiyo in foorarsiga xariggu uusan ka badnaan doonin qiimayaasha la oggol yahay, ka dhig xarigga inuusan soo saarin walaac foorarsi ah, si fiber optic uusan u soo saarin khasaaro dheeraad ah fiilooyinka.
Qaab dhismeedka iyo Waxyaabaha:
Thimble-Biyo kulul oo galvanized ah. Thimble waxaa loogu talagalay inuu culeyska soo qaado oo uu sudho tiirka.
Ulaha Gargaarka—– silig bir ah oo galvanized ah. Qoryaha Armorku waxay kordhiyaan khilaafka lakabka walxaha gudaha ka soo baxa ee fiilooyinka. Ulaha waxaa lagu soo uruuriyay afar qaybood oo aqoon isweydaarsi ah oo yaraynaya khaladaadka khaldan iyo xawaareynta rakibidda. Dhammaadka ayaa u foorarsanaya dibedda si ay u bixiyaan yareynta culeyska meelaha muhiimka ah ee laga baxo.
Gawaarida Gawaarida Gaaban ee Gaaban ee ADSS Cable
Length Span oo lagu taliyay: ≤50m
Mid ka mid ah xirmooyinka hakin gaaban oo taako ah waxaa ku jira hal shaashad iyo helical ah sidoo kale waa la dalban karaa iyada oo aan la jarin.
Shayga Dhexroor fiilo φ
CR-50-10.6 / 11.6 10.6-11.6 48 500 Buluug
CR-50-11.7 / 12.8 11.7-12.8 Cagaar
CR-50-12.9 / 14.1 12.9-14.1 Casaan
CR-50-14.2 / 15.6 14.2-15.6 Jaale
CR-50-15.7 / 17.3 15.7-17.3 Madow
CR-50-17.4 / 19.1 17.4-19.1 Liin dhanaan
Adss Hakinta haysa
Hawada Fiber Cable Hawada
Hawada Helical Hakinta
Hawada Opgw Hakinta
Isku-hakinka Hakinta Horudhac ah